Black Friday နည်းပညာ၏အကောင်းဆုံးအပေးအယူများ Gadget သတင်း
ဝေးသောငါတို့ထင်စေခြင်းငှါအဘယျသို့ကနေ Black ကသောကြာနေ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌သောကြာနေ့ထက်ပိုသောကမ်းလှမ်းမှုများကျော်လွန်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဒီနေရာမှာစပိန်မှာတောင်ဒီလိုမျိုးအရောင်းအ ၀ ယ်မျိုးကိုလုပ်ပြီးပြီ၊ ဒါကိုပိုရှည်အောင်လုပ်ဖို့ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။
Black Friday ကိုနိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သော်လည်း Black Friday ရက်သတ္တပတ်သည်ကမ်းလှမ်းမှုများစွာကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးသင်မည်သည့်နေရာတွင်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်ကိုအကောင်းဆုံးပြသချင်ပါသည်။ အရေးကြီးသောအထူးလျှော့စျေးနှင့်အပေးအယူများနှင့်အတူ Black သောကြာနေ့၏အကောင်းဆုံးသောကမ်းလှမ်းမှုများဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှာဖွေပါ၊ သင်သူတို့ကိုလွမ်းမည်
2 အခြား featured ကမ်းလှမ်းမှု
4 Huawei စတိုးတွင်အထူးကမ်းလှမ်းမှုများ
ဤအရေးကြီးသည့်ရောင်းအားရက်သတ္တပတ်၏ပထမဆုံး နေ့မှစ၍ Amazon သည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များကိုပတ်လမ်းအတွင်းသို့ရောက်စေလိုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည် Alexa နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ပဲ့တင်သံ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Echo Dot အသစ်၊ Gadget News မှကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးကောင်းမွန်သောရလဒ်များပေးသောထုတ်ကုန်အသစ်နှင့်စတင်သည်။
သို့သော်ဤကမ်းလှမ်းမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားသောထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့အခုဆိုရင်ငါဟာစိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးလို့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောမယ်၊ စတုတ္ထမျိုးဆက် Amazon Echo နဲ့အတူသွားနေတယ်။
ဒီစပီကာသည် Dolby Atmos နှင့်စွမ်းအားကောင်းမွန်သည်။ အပိုင်းများထဲမှစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအပြင် Jeff Bezos ကုမ္ပဏီ၏ virtual assistant နှင့် Zigbee protocol နှင့်သင်၏ smart ထုတ်ကုန်များအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ရန်အပြည့်အဝလိုက်ဖက်သည့်အပိုင်းများအပြင် အိမ်မှဆက်သွယ်သည် ဒီအမှု၌ကမ်းလှမ်းမှုကပုံမှန်ဈေးနှုန်း၏ ၉၉.၉၉ ယူရိုမှ ၆၉.၉၉ ယူရိုအထိရှိသည်။
နောက်ဆုံးအမေဇုန်ထုတ်ကုန်များ၏အထူးကမ်းလှမ်းချက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်စက်စက်ကျန်နေတော့သည် မီးသတ်တီဗီ ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားခဲ့သောအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံး multimedia စင်တာ။
ဒီအမေဇုံမီးသတ်တီဗီကို Cube ၎င်းသည်ရောင်းချမှုမှာ ၁၁၉.၉၉ ယူရိုမှ ၇၉.၉၉ ယူရိုသို့ကျဆင်းသွားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ၎င်းသည် 119,99K resolution ဖြင့် Dolby Vision HDR79,99 ပါဝင်သောကစားနိုင်စွမ်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကအလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောစျေးတစ်ခုဖြစ်သည်။
အခြား featured ကမ်းလှမ်းမှု
Sony WH1000XM3 နားကြပ်နဲ့စတာ။ စျေးကွက်ထဲတွင်ဆူညံသံကိုပယ်ဖျက်သည့်အရည်အသွေးမြင့်ဆူညံသံအဖြစ်ကြာမြင့်စွာခံယူထားသူများ၊ ဒါကြောင့်ကမ်းလှမ်းမှုပို။ ပင်ထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဤနားကြပ်များသည်ယူရို ၃၈၀ မှ ၄ င်းတို့၏ပုံမှန်ဈေးနှုန်းဖြစ်သောယူရို ၂၂၉.၀၀ မှ ၂၆၉ သို့သာရနိုင်သည်။
ယူရို ၂၉၉.၀၀ သာကျသင့်သော Sony WH1000XM3 နားကြပ်ကိုဝယ်ပါ (LINK)
အခြားတစ်ဖက်တွင်စမတ်နာရီအနည်းငယ်အကြောင်းပြောဆိုကြပါစို့။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Amazfit GTS အသစ်ကိုအာရုံစိုက်မည်။ Amazon မှာယူရို ၁၂၉ ကနေရှာတွေ့နိုင်မယ့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်များသောအားဖြင့်တော့နည်းနည်းကုန်ကျပေမယ့်ဒီတစ်ခါမှာတော့ link က 129 ယူရိုလျှော့စျေးကူပွန်ရပါလိမ့်မယ်။
(၁၀၄.၉၉) ဒေါ်လာဖြင့်သာ Amazfit GTS ကို ၀ ယ်ပါ။LINK)
ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်တွင်တွေ့ရသောအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းအချိုးအစားရှိသည့်စမတ်နာရီများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်မှာသေချာသည်။ ၎င်းသည် iPhone ကဲ့သို့သော iOS ထုတ်ကုန်များနှင့်လည်းအလုပ်လုပ်သော်လည်း၎င်းကို Android အသုံးပြုသူများအတွက်အထူးအကြံပြုလိုသည်။
ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ gaming” laptop တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏ ROG (Republic of Gamers) ဗားရှင်းတွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော Asus ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုနေသည်။ မကြာခဏဆိုသလိုကျွန်တော်တို့ဟာဒီထုတ်ကုန်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးပြီ၊ မင်းတို့ကြိုက်တယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ်၊ ဒါကြောင့်ယူရို ၃၀၀ နီးပါးလျှော့ချတဲ့ Laptop တစ်လုံးဖြစ်တဲ့ Zephyrus G15 ကမမျှော်လင့်ဘူး။
ယူရို ၁၀၉၉ ဖြင့်သာ Asus ROG Zephyrus G15 ကိုဝယ်ပါLINK)
ကျွန်ုပ်တို့တွင် 15,6 Hz ရှိ 144″ Full HD panel ရှိပြီး၎င်း၏ခေတ်မီ။ အစွမ်းထက်သော Ryzen74800 HS, 16 GB RAM နှင့် 1TB SSD hard drive ကိုလူသိများသော NVIDIA GTX 1660 နှင့်တွဲဖက်ထားသည်။ အချို့သောဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုပျော်ရွှင်စွာကစားနိုင်မည့် Gaming laptop တစ်ခု။
နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုမှာ MSI Modern 14 B10MW-026XES ဖြစ်သည် ၁၄ လက်မအရွယ် FHD resolution ရှိသည့်ကျွန်ုပ်တို့သည် 14GB RAM နှင့် 16GB SSD ရှိသည်။LINK).
LG က 27UN83A ၂၇ လက်မအရွယ် 399K UHD IPS panel နှင့် (၃၉၉) ယူရိုသာရှိသည်။LINK)
Philips က 27E1S / 00 ၂၆ လက်မအရွယ် FHD resolution ဖြင့်ယူရို ၁၆၉ သာလျှင်၊LINK)
ဤအရာကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်သည် LG က 50UN70006LA ၅၀ လက်မအရွယ်တီဗီပါသည့် VA panel ပါ ၀ င်သော webOS Operating System နှင့် HDR50 လိုက်ဖက်မှုရှိပြီး ၃၆၁ ယူရိုသာရှိသည်။LINK).
နောက်ဆုံးတီဗီအတွက်လျှော့စျေး Samsung QE43Q60T, အရာအတွက်သာ 529 ယူရိုမှာရှိနေမည် ဒီနည်းကို Link ။
၎င်းတို့တွင်ကဲ့သို့အသံဖိုင်များတွင်အထူးလျှော့စျေးများပါ ၀ င်သည် Huawei FreeBuds စတူဒီယိုယူရို ၂၄၉ အတွက်အသံအရည်အသွေးနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအမှတ်တံဆိပ်၏ပထမဆုံးနားကြပ်သည်။ ဒီတူညီတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွင်းမှာပဲသင်လည်းရှာနိုင်သည် အခမဲ့ Buds Pro € 149 သို့မဟုတ် Huawei FreeBuds3€ 89 သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » အနက်ရောင်သောကြာနေ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအပေးအယူ
Sonos Arc သည် Multichannel LPCM နှင့် Black Friday သဘောတူညီချက်အသစ်များကိုလက်ခံရရှိသည်